စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> Software များ >> အန်းဒရွိုက်
Android သင်ခန်းစာများ။ လှည့်ကွက်များ၊ ကျူတိုရီရယ်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကို အများဆုံးအသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှအားလုံး။
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမှ Play Store ပြင်ပရှိ အက်ပ်လီကေးရှင်းများအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်စေမည့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ။
AntennaPod သည် Podcast Player တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်။ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ဒီဇိုင်းနှင့် Podcast ပလေယာ/စာရင်းသွင်းမှုမန်နေဂျာတွင် လိုအပ်သည့် အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် ကြော်ငြာအခမဲ့အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ ဒါဟာ ကျွန်တော် ခဏတာ စမ်းသပ်ပြီးတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် အံ့မခန်းပါပဲ။ အတူသုံးပါတယ်။ F-Droid Android တွင်၊ ၎င်းကို Play Store တွင်လည်း ရှာနိုင်သည်။
အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော် iVoox ကိုသုံးထားပြီး AntennaPod အတွက် 100Mb ကျော်ကို 10MB ကျော်သာ ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ ကြော်ငြာများအပြင် iVoox သည် သည်းမခံနိုင်အောင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကျွန်ုပ်အပေါ် ကျရောက်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ်ကစားသမားများစွာအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် ကြော်ငြာများမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Open Source ရွေးချယ်မှုနှင့် F-Droid ကိုအသုံးပြုပါသည်။ လောလောဆယ်တော့ အရာအားလုံးက အားသာချက်တွေပါပဲ။
အကောင်းဆုံး F-Droid အက်ပ်များ
ငါတို့တွေ့ပြီ F droid ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ ဘာကြောင့် သုံးသင့်လဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ အကောင်းဆုံး အပလီကေးရှင်းအချို့ကို သင့်အား အသိပေးပါ။. အကောင်းဆုံး application သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက မင်းကို ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။
ဒါဆို ငါထွက်သွားတော့မယ်။ ဤအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အက်ပ်လီကေးရှင်းများ၏ သိုလှောင်မှုမှ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဟု ကျွန်တော်ယူဆသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများ. အချို့အတွက် အခြားရွေးချယ်စရာများကို သင်တွေ့မည်မဟုတ်ပါ၊ အခြားသူများအတွက် သင့်တွင် အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အက်ပ်များကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုသည့် အဆိုပါအက်ပ်ကို အခြားအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပလီကေးရှင်းသို့ လွှဲပြောင်းရန် စိတ်ဝင်စားပါက အကဲဖြတ်ရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
F-Droid သည် ဆော့ဖ်ဝဲသိုလှောင်ရာ၊ အက်ပ်စတိုးတစ်ခု၊ Play Store ၏ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ၏ Play Store ဖြစ်သည်။ F-Droid သည် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး အထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သော အပလီကေးရှင်းများမှာ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းရင်းမြစ် (FOSS) ဖြစ်သည်။ သင့်ကုဒ်ကို GitHub တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါက ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အဲဒါက ဘာလဲဆိုတာ သိပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ခု သိချင်တာက သင့်မှာ Play Store ရှိရင် ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တာလဲ။
ပင်လယ်ဓားပြအက်ပ်များ မရှိပါ။. အဲဒါအတွက် မင်းမှာ တခြားရွေးချယ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်။ F-Droid သည် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက် ကတိကဝတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါအားသာချက်ယူ ပတ်ပတ်လည် fix မိုဘိုင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကကျွန်ုပ်အားမကြာခဏတောင်းဆိုလေ့ရှိသောလုပ်ရပ်များစွာကိုရှင်းပြရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ငါရှင်းပြသည် Android တွင် APK application များကိုမည်သို့ install ရမည်နည်း.
APK ဆိုတာဘာလဲ၊ သင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်မည်ဆိုပါကဆောင်းပါး၏အဆုံးသို့သွားလျှင်သင်ချက်ချင်းသွားသည်။
ငါ့ကိစ္စမှာတော့ ငါမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ် Play Store ကိုပြန် install လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်ယောက္ခမကစားရန်အတွက် SIM မပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်။ ငါကမဖွင့်နိုင်ဘူး၊ စက်ရုံကိုတောင်မစက်ရဘူးတောင်မှ၊ စမတ်ဖုန်းဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်တာထက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်တာကပိုမြန်တယ်။